के तपाईले सपनामा नागदेवताको दर्शन पाउनु भयो , यस्ता हुन्छन यसका संकेतहरू ! जानी राखौ «
के तपाईले सपनामा नागदेवताको दर्शन पाउनु भयो , यस्ता हुन्छन यसका संकेतहरू ! जानी राखौ
Published : 26 March, 2020 9:28 am
‘पराईको सिन्दर’ लिएर आइन् तारा अधिकारी
गीतकार तारा अधिकारीको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ‘पराईको सिन्दुर’ बोलको गीतमा नरेन्द्र
प्रदेश २को रौतहटमा लागूऔषधहित ४ जना पक्राउ
रौतहट प्रहरीले लागूऔषध गाँजासहित ४ जना तस्करलाई पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय देवाही
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-११ का ११ महिने दूधे बालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार सेती
भारि बर्सा को कारण ५ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना भयो बन्द।
निरन्तर भारी वर्षाले गर्दा खोला तथा नदीमा आएको बाढीको कारण करिब ५ सय मेगावाट विद्युत्
ज्योतिष अर्जुन क्षेत्री ठगीको आरोपमा पक्राउ !
काठमाडौँ, असार २६ गते । ज्योतिष’ अर्जुन थापा क्षत्री पक्राउ परेका छन् । क्षत्रीसहित ३
हे दैव : म्याग्दीमा पहिरोले घर बगाउँदा ७ जना बेपत्ता !
दिनरातको वर्षासँगै पहिरो जाँदा म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–६ मराङको रिखामा आज बिहान ७ जना बेपत्ता भएका
भारि बर्सा को कारण ५ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना
हे दैव : म्याग्दीमा पहिरोले घर बगाउँदा ७ जना
हे भगवान: पोखरामा पहिरोमा पुरिएर ४ जनाको मृत्यु, ९